İETT Otobüsü Cayır Cayır Yandı – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulIETT Bus Cayır Cayır la gubay
IETT Bus Cayır Cayır la gubay
09 / 06 / 2019 34 Istanbul, IETT, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Gaadiidka baska ayaa gubay cayashir
3, oo uu ka tagi doono saldhigga baska subixii ee Istanbul, Ayazağa. Baska madaarka ee jihada Arnavutköy Habipler oo faarujinaysa iyada oo magaaladu si lama filaan ah dab qabsaday. Waqti gaaban, qof ka mid ah baska kuma soo noqon karo kubbadda dabka ka hortagay musiibo suurtagal ah.
SözcüSida laga soo xigtay warbixinta Özlem GÜVEMLİ; Shirkadda 34 TP 5873 oo ay adeegsanayeen IETT baska ay ku shaqeeyeen qandaraasleeyaha garoonkii Ayazaqa ayaa si lama filaan ah u qabsaday dabkii ka kacay qaybta mishiinka ee Arnavutköy Habipler Road saacadba si loo sameeyo duulimaad 3 ah oo u dhexeeya 06.00 iyo Airport Atatürk. Lakuliska rakaabka ah ee baska ku soo laabtay kubada markii waqti la joojiyey ayaa la joojiyay.
IMM CHP Group SözcüSu Tariq Balyali, Ay Ayazaga Garage wakhti dheer oo ku jira qaabka heshiiska adeegga shirkad hoose oo shirkad hoose ah si loogu sameeyo dayactirka dayactirka maalin kasta iyo dayactirka joogtada ah ee basaska ayaa la sameeyay. Waxaa laga cabsi qabey in ay sababi doonto shil. Waxaa la cabsi qabaa, baskuna wuxuu gubay saaka markii aan jirin rakaab. Haddii ay ku sugnayeen rakaab gaariga, waxaa jiri lahaa masiibo weyn. "
Balyan ayaa sidoo kale sheegay in sababta ay basku uga tagayaan Ayazağa Garage halkii gawaarida ku dhow garoonka, waa in ay buuxiyaan shilalka sida waafaqsan heshiiska qandaraaslaha.
Metrobus baa gubtay
Mashruuca İzmir ee ka yimid Kartal Metro
Mecidiyeköy oo loo yaqaan "Cable Cable"
Mecidiyeköy ilaa baabuurka cable-ka ah
Daraasad lagu Aqoonsado Dareeska Marmaray Study (Sawir Sawir)
Tareenka mini-mareerka ee minbar
Gawaarida Gawaarida ah ayaa la gubay
Dayactirka Patchwork ee waddooyinka ku yaal Bosphorus
Dhismaha TCDD ayaa gubtay
Gaariga hore ee loo adeegsaday Turgutlu Gar ayaa gubay
Gaadiidka kiimikada lagu gubay ee Belgium (Video)
Adeegga basaska ee 3-Atatürk Airport
Xallinta Nidaamka Isgaadhsiinta ee Gaadiidka Magaalada
IETT waa 65 Milyan Euro Metrobus Root Garage